ओलीको भित्रि डिजाईनमा एमाले सांसदहरुको सभामुख सित चर्काचर्की, ओलीको दम्भ कायमै — Imandarmedia.com
ओलीको भित्रि डिजाईनमा एमाले सांसदहरुको सभामुख सित चर्काचर्की, ओलीको दम्भ कायमै
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका १४ जना सांसद बिहीबार बिहान ११ बजेतिर सभामुखको कार्यकक्ष प्रवेश गरेका थिए। छलफल चल्दाचल्दै सभामुख र एमाले सांसदहरूबीच चर्काचर्की पर्‍याे । त्यहाँ भएको चर्काचर्की बाहिरसम्मै सुनिएको थियो। भित्र हल्लाखल्ला भएपछि सभामुखको कार्यकक्षबाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीहरूसमेत सतर्क बनेका थिए ।
एमाले सांसदहरू सभामुखलाई भेट्न आउनुको कारण थियो– कारबाहीको सूचना प्रकाशनको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउनु । एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर संसद् सचिवालयलाई भदौ १ गते जानकारी गराइसकेको छ । तर, संसदले कारबाहीको सूचना जारी गरेको छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलले कारबाही गरेको स्थितिमा संसदले सूचना टाँसेपछि सांसदको पद सकिन्छ।
एमालेको चाहना छ– निर्वाचन आयोगले माधव नेपालहरूले गठन गरेको पार्टीलाई मान्यता दिनुअघि नै उनीहरूमाथि कारबाही होस्। त्यसैले एमालेले निरन्तर सभामुखमाथि दबाब दिँदै आएको छ। बिहीबार नै एक अन्तर्वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदबाट सूचना जारी नभएकोमा सभामुखमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले सभामुख कुनै पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो हुन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
छिटो सूचना टाँस गर्न माग गर्न आएका एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमा छिरेपछि धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्न थालेका थिए। सुरुसुरुतिर माहौल शान्त थियो। सौहार्दपूर्ण ढंगले नै गफगाफ चलेको थियो। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विगतको नजिर देखाउँदै छिट्टै सूचना निकाल्न आग्रह गरेका थिए। भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘विगतमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी, माओवादी सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, लेखराज भट्टको हकमा छिट्टै सूचना जारी भएको थियो।
विगतमा अरू पार्टीले कारबाही गर्दा २४ घन्टा, ४८ घन्टा पनि नबित्दै सूचना जारी भयो । नेकपा एमालेले गरेको कारबाहीको हकमा के कारणले यो विलम्ब भएको छ ? बैठकमा अरू सांसदहरूले पनि क्रमैसँग बोले । एमाले सचेतक शान्ता चौधरीको बोल्ने पालो आयो। सूचना जारी नगर्दासम्म सभामुखकै च्याम्बरमा बस्ने उनले चेतावनी दिइन्। सभामुखको व्यवहार विभेदपूर्ण रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्।
उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, हामीलाई विभेद गर्नुभयो भन्ने महसुस भइरहेको छ। तपाईंले अरू पार्टीलाई एउटा खालको व्यवहार गर्नुभयो। तर, हाम्रो पार्टी एमालेलाई अर्कै खालको व्यवहार गर्नुभयो। अहिले यहाँ बस्दाबस्दै सूचना जारी होस्। तपाईंले सूचना जारी नगरुन्जेल हामी यहीँ बस्छौँ।
एमाले सांसद महेश बस्नेतले बल प्रयोग गर्नेसमेत चेतावनी दिए। त्यहाँ बस्नेतले भनेका थिए, ‘एमालेले सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना तत्काल जारी होस्। सूचना जारी गर्न ढिलो भएको छ। सूचना जारी भएन भने बल प्रयोग गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसतर्फ सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
महेश बस्नेत र शान्ता चौधरीको कुरा सुनेपछि सभामुख सापकोटा आक्रोशित भएका थिए। एमालेका सांसदहरूका अनुसार उनी कुर्सीबाटै उठेर जंगिन थाले। ती सांसदले भने, ‘हामी पनि रिसायौँ । उहाँ पनि कुर्सीबाटै उठेर रिसाउन थाल्नुभयो। माहाेल बिग्रियो। चर्काचर्की भयो।
आफू कानुन र नियमअनुसार अघि बढ्ने, कसैले धम्की दिँदैमा निर्णय नगर्ने सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदहरूलाई बताए। सभामुखले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू यहाँ किन आउनुभएको ? धम्की दिन आउनुभएको ? दबाब दिन आउनुभएको ? म कुनै पनि हालतमा दबाबमा निर्णय गर्न सक्दिनँ। संविधान, कानुन र नियमावलीअनुसार निर्णय गर्छु। अहिले म उक्त कारबाहीको विषयमा अध्ययन, छलफल र परामर्श गरिरहेको छु।
एमाले सांसदहरूले बोल्दा प्रयोग गरेको शब्द चयमा सभामुखको सबैभन्दा बढी आपत्ति थियो। ‘तपाईंहरूले सार्वजनिक मञ्चमा गर्ने भाषण र सभामुखको कार्यकक्षमा बोल्ने भाषाको भिन्नता बुझ्न सक्नुहुन्न ? कि हुनुपर्छ भन्ने पनि ठान्नुहुन्न ? यतिवेला तपाईंहरू राज्यको तीनवटा अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका)मध्ये एउटा अंगको प्रमुखको कार्यकक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईंहरू त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ,’ सभामुखले सम्झाएका थिए।
त्यसपछि एमाले सांसदहरूले पनि गल्ती भएको महसुस गर्न थालेका थिए। उनीहरू आफैँले एक–अर्कालाई सम्झाउन थाले। सभामुखले पनि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन आग्रह गरे। त्यसपछि झन्डै सवा घन्टा बसेको छलफल सकिएको थियो।